Mpikota photos- mpikota onu otutu jpg online / offline
Na-ebuli ogo oyiyi na ogo onyonyo na ntanetị yana iji jpg onyonye ihe oyiyi dị elu.
*Nwere ike ịgbakwunye ihe oyiyi 10 iji kpokọta.
Esi mpikota onu onyonyo?
Pịa Tinye Faịlụ iji tinye faịlụ. Nwere ike ịgbakwunye faịlụ na-akparaghị ókè.
Pịa Bido mpikota onu ka ịmalite mkpakọ algọridim iji belata oke onyonyo etinyere. Pịa Kagbuo ịkwụsị.
Pịa Download ka ị budata jpeg / abịakọrọ png ma ọ bụ mpịakọta oyiyi ma ọ bụ foto gị.
Nwere ike mpikota onu JPG, GIF, PNG nwere ezigbo mma. Belata nha nke JPG, GIF, na PNG n’otu ebe.
Kedu ka eserese eserese si arụ ọrụ?
Foto smartphone gị na-ewere ohere dị ukwuu. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi belata ha.
Ngwa a na-ebelata ogo nke ihe oyiyi site na nyochaa pixel ọ bụla. Site na ule anyị, nhalata faịlụ nha site na foto eserese dị n'etiti 20% na 85%. Ihe onyonyo ihe onyonyo a bu mmemme iji kpota ma mee ka foto dijitalụ megharia, yana care lekọta foto dijitalụ gị anya nke ọma iji chebe ezigbo onyonyo gị. Anyị compressors gụnyere pụrụ iche kere foto lossy ịpị engines na teknụzụ.
Nke a bụ ihe atụ nke otu ngwa a ga - esi nyere gị aka belata oke onyogho.
Nke a bụ naanị ihe atụ iji gosi gị etu eserese gị kacha karịa.
mkpakọ foto bụ ngwa weebụ izizi mbụ.
mpikota onu photos online na offline bu fechaa na ike oyiyi mkpakọ ngwa. Ngwa a ga - enyere gị aka ịpịkọta foto n'ime foto pere mpe na enweghị ogo ma ọ bụ jiri mkpakọ ọnwụ. Nwere ike iwunye ngwa ahụ na ngwaọrụ gị ma jiri ya na ntanetị. Nwere ike iwunye ngwa a na ngwaọrụ Windows / Android / Apple / Linux. Ngwa a bụ ngwa n'efu nke ịkwesighi ịkwụ ụgwọ ụdị ego ọ bụla. Mekọta ihe onyonyo gị na ngwa anyị bụ ụzọ dị mfe iji hụ na onyonyo gị dị fechaa, na-ebudata ngwa ngwa ma mepụta ngwa ngwa. Etu esi aputa ihe osise nile na ihe ngosi PowerPoint. Ngwa nhazi ihe oyiyi anyị nwere ike inyere gị aka ịgbanwe jpg faịlụ compressor n'ịntanetị n'efu ma ọ bụ gbanwee ihe oyiyi ma ọ bụ belata nha jpg.
Ihe karịrị otu nde downloads, mkpakọ ngwa bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ihe oyiyi njikarịcha software dị na ịntanetị ma ọ bụ na ịntanetị. Anyị na-enyere ọtụtụ nde ndị na - ese foto, ndị na - ede blọgụ, webmaster, azụmaahịa, ma ọ bụ ndị ọrụ nkịtị aka ịchekwa, izipu na ịkekọrịta foto dijitalụ. Ngwa na-agbanwe ma weghachite onyonyo rụọ ọrụ nke ọma, na-enye ya ohere ịkwalite faịlụ onyonyo na-enweghị ịgbanwe mkpebi ma ọ bụ mfu na ogo. Anyị na-anwa iji AI ka mbelata nha onyonyo, dịka na HBO's Silicon Valley. Ngwa a ga - eme ka onyonyo gị rụọ ngwa ngwa na njikọ ịntanetị nwayọ.